မြန်မာပြည်၏တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး၊(သို.မဟုတ်)ပဋိပက္ခတိုင်းပြည်၊ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
Ethnic Politics in Burma
States of Conflict
* ISBN: 978-0-415-41008-3
* Binding: Hardback
* Published by: Routledge
* Publication Date: 20/06/2008
* Pages: 304
ဤစာအုပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက်ပြည်တွင်းစစ်ကိုတည်ဆောက်လာခဲ့သောအတွေးအခေါ်ကိုဆန်းစ စ်ထားပါသည်၊တိုင်းပြည်တွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားများ၏ပဋိပက္ခကိုနာလည်သဘောပေါက်ထားပြီးကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေး လာခဲ့သောကိုလိုနီသာသနာပြုအဖွဲ.များမှကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတက်ကြွသူများအထိပါဝင်သောနိုင်ငံရေးလက်ရွေးစင်များနှင့် နိုင်ငံခြားအဖွဲ.ကွန်ယက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်ဖော်ပြထားပါသည်၊
ဤစာအုပ်သည် ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်ခင်ကာလနှင့်ကိုလိုခေတ်ကာလ၊နိုင်ငံရေးအရထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောစရိုက်သဘာဝ တစ်ခုအနေနဲ.တိုင်းရင်းသားလက္ခဏာများသတ်မှတ်ချက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို.ကိုအတိုးချုံသုံးသပ်ထားပါသည်၊(၁၉၄၈မှ၁၉၆ ၂အထိ)နှစ်များတွင် လွတ်လပ်ရေးအတွက်နှင့်ပါလီမာန်ဘောင်အတွင်းတိုက်ပွဲနှင့်(၁၉၆၂မှ၁၉၈၈အထိ)နှစ်များတွင်ဆက်တို က်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောဆိုရှယ်လစ်အုပ်ချုပ်မှုကာလတွင်တိုက်ပွဲများကိုလည်ဖော်ပြထားပါသည်၊
ဤစာအုပ်သည်၁၉၈၈ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီအုံကြွမှုကာလမှ၂၀၀၇နှစ်၊ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလ(ရဟန်းသံဃာတော်များနဲ. သာမန်လူထုများလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးစစ်အစိုးရကိုဆန်.ကျင်တဲ့အချိန်)အကြာတွင်မြန်မာပြည်မှာ ဆက်တိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပ က္ခ၏ဒဏ်ရိုက်ချက်များ၊ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏အကြာင်းရင်းများနှင့်ယင်၏စွမ်းအားထက်မြက်မှုများကိုလည်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့
ဤစာအုပ်တွင် အထင်ရှားဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်သာကောင်းစွာနာလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်(၂၀) တွင်မြန်မာပြည်၏နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါသည်၊အဲဒီကိစ္စဟာစစ်အစိုးရနှင့်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအများစုအကြား၁၉၈ ၉ခုနှစ်ကတည်ကအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်အခန်းဆက်ဇာတ်လမ်းပင်ဖြစ်သည်၊
စာအုပ်သည် မေလ(၂နှင့်၃)ရက်နေ.တွင်ရိုက်ခတ်သွားတဲ့ဆိုင်းကလုန်နာဂစ်ကြောင့်ထုထည်ကြီးမားသောလူသားချင်းဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်အကြောင်းကိုနိဂုံစကားအကျဉ်းချုပ်ဖြင့်နိဂုံချုပ်အဆုံးသတ်ထားပါသည်။
၄။ပဋိပက္ခ၏ထိခိုက်ဆုံးရှံးမှု (လူသားချင်းဒဏ်ရိုက်ခတ်မှုနှင့်တုံ.ပြန်ချက်များနှင့်ဒုက္ခသည်များ၊ပြည်တွင်းအိုးအ်ိမ်မဲ့သူများ၊နိုင်ငံ တကာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊
Ashley South ဟာမြန်မာပြည်နှင့်အရှေ.တောင်အာရှနဲ.ပတ်သက်သောနိုင်ငံရေးနှင့်လူသားချင်းပြဿနာများတွင်ကျွမ်းကျင် သူ၊လွတ်လပ်သောလေ့လာသုံးသပ်သူဖြစ်ပါသည်၊သူသည် ကုလသမဂ္ဂနှင့်အခြားသောအဖွဲ.အစည်းများအတွက်ကျယ်ပြန်.စွာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးတာဝန်အမျိုးမျိုးကိုလည်ယူထားပါသည်၊သူသည် Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake စာအုပ်ကိုရေးသားသူလည်ဖြစ်သည်၊(ယင်စာအုပ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်)။
တောင်ကုတ်တွင် လုံခြုံရေး ဆက်လက် တင်းကျပ်ထားဆဲ လုံခြုံရေး ယူထားသူများ ရိက္ခာမလုံလောက်သဖြင့် လူထုထံမှ တောင်းရမ်း စားသောက်နေ
>KIA Sniper Team Killed three Burmese soldiers. ဗမာစစ်သားသုံးယောက်ကိုကချင်းလက်ဖြောင့်စနိုက်ပါးတပ်ဖွဲ.ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့
Flight from Junta
Fleeing from fighting